काठमाडाैं | मंसिर ९, २०७८
मानिसले अनेक किसिमका भावना अनुभव गर्छ : प्रेम, रिस, घृणा, चिन्ता । प्रत्येक भावनाले शरीरमा परिवर्तन ल्याउँछ । खुशी हुँदा अनुहारमा मुस्कान आउँछ अनि रिस उठ्दा आँखीभौं उचालिन्छ ।
कतिपय अवसरमा हाम्रो शरीरका लक्षणले दिएका संकेतले हामीलाई झुक्याउँछ । कहिलेकाहीँ अनुभवी मानिसले पनि दिमाग के महसूस गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदैन ।
अमेरिकाकी मनोवैज्ञानिक लिजा फेल्डम्यान एक दिन ल्याबमा घन्टौं काम गरेपछि बोर भइरहेकी थिइन् । एउटा साथीले उनलाई डेट जान अफर गरे । लिजालाई त्यो साथी खासै मन पर्दैनथ्यो तर जाऊँ न त एकचोटि भनेर उससँग कफी पिउन गइन् ।
कफी पिउँदै गर्दा लिजाले त्यो साथी त्यति नराम्रो रहेनछ भन्ने अनुभव गरिन् । उससँग फेरि एकचोटि डेट जान सकिने उनलाई अनुभव भयो । उनको शरीरले अनेक लक्षण देखाउन थाल्यो : पेट हल्लिन थाल्यो, टाउको भारी भयो र भावनाको तूफान मनमा उठ्यो ।
घर आउँदाखेरी उनको हालत यस्तो थियो । तर घर पुग्नै लाग्दा उनलाई चक्कर आउन थाल्यो र उल्टी पनि भयो । खासमा उनलाई भाइरल ज्वरो पो आएको रहेछ । उनले भावनाको तूफान भन्ठानेको कुरा त रोगको संकेत पो रहेछ ।
लिजाले मानिसको भावनामाथि केही अघि अनुसन्धान गरेकी थिइन् । लिजाले आफ्नो अनुसन्धान र अनुभवको आधारमा एउटा किताब लेखेकी छन् : हाउ इमोसन्स आर मेड ।
लिजाले किताबमा हामीले शरीरको संकेत बुझ्नका लागि बढी दिमाग लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन् । उनले भावनामाथि नियन्त्रणका तरिका पनि बताएकी छन् ।
उनका अनुसार, अनेक अवसरमा दिमागले संकेतहरूलाई घालमेल गरिदिन्छ ।
पेट दुख्दा पेटको संक्रमणको पनि संकेत हो अनि घरबाट टाढा हुनुहुन्छ भने परिवारको याद आउँदा पनि पेट दुख्छ । मुटु जोडले ढुकढुक ग–यो भने तपाईं उत्साहित भएको संकेत हो वा सार्वजनिक भाषण दिनुपर्दा गरिएको चिन्ता पनि हो । अफिसमा धेर कफी पिउनुभएको पनि संकेत हुनसक्छ ।
लिजाका अनुसार, रिस, चिन्ता वा घिनको भावना हामीमा जन्मिँदैखेरी आउँदैन । हाम्रो हुर्काइ, वातावरण र हालत अनुसार यो विकसित हुन्छ । हाम्रो आमाबुवा, साथी, किताब, पुराना यादहरूले हामीलाई विशेष वातावरणमा विशेष प्रतिक्रिया दिन सिकाउँछन् । यिनैको आधारमा हाम्रो भविष्यको व्यवहार निर्धारित हुन्छ ।
भोक, थकान र रोगको संकेत हाम्रो शरीरमा प्रायः एकैखाले हुन्छ । हामीले यिनको फरक छुट्ट्याउनु आवश्यक हुन्छ । लिजाका अनुसार, शरीरका संकेतहरूलाई सही पढ्न जान्नुपर्छ । मानिसले दिमागको अलिक कसरत गरेर यो काम गर्न सक्छ ।
हिन्दू धर्ममा यसकारण चढाइन्छ सूर्यलाई जल ?
कनकाई नगरप्रमुखमा एमाले र उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी, दुबै उम्मेदवार दोहोरिए
पोखरा महानगरपालिका धनराजले अग्रता बनाउँदै, कसको कति मत ?
प्रधान सेनापति र फ्रान्सेली कार्यवाहक राजदूतबीच भेटघाट
दुल्लु नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमाले विजयी
काठमाडौं महानगर अपडेट : बालेनको १५ हजार ४०२, केशवको ८ हजार २८८ मत